Traze Apk Download Ho an'ny Android [2022 Update] | APKOLL
Traze Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]
Miverina miaraka amin'ny rindranasa Android mahagaga hafa ho anao izahay, izay fantatra amin'ny anarana hoe Traze Apk. Izy io no fampiharana Android farany, izay novolavolaina manokana hisorohana ny fipoahan'ny COVID-19. Manome rafi-pitsongo avo lenta izy io, izay ahafahan'ny olona voakitikitika mora foana. Izy io dia fampiharana maimaim-poana, izay manome ny serivisy rehetra misokatra ho an'ny rehetra.
Araka ny efa fantatrareo, izao tontolo izao dia miatrika ny iray amin'ireo toe-javatra mahatsiravina indrindra, izay nisy fiatraikany tamin'ny ankamaroan'ny firenena eran'izao tontolo izao. An'arivony ny maty nitranga noho ny valanaretina, izay natomboka tany Chine ary tsy ela dia nisy firenena hafa voakasik'izany. Amin'ny voalohany dia ahenao ny fihanaky ny valan'aretina Shina, amin'ny alàlan'ny fanidiana hidy sy fomba fampiasa hafa.
Saingy misy olona an'arivony ao amin'ny firenena, izay tsy olom-pirenen'i Sina amin'ny fomba ofisialy. Niverina tany amin'ny fireneny ny olona, ​​izay nahatonga ny valanaretina. Vetivety dia voakasik'izany ny firenena rehetra manerantany. Ka firenena samy hafa no nampiasa fomba isan-karazany hisorohana izany.
Toy izany koa, ny Filipina dia nampiditra ity app ity, izay ahafahan'ny olona mamantatra mora foana. Manolotra ny endri-javatra tsara indrindra, izay ahafahan'izy ireo mahita ny vaovao rehetra momba ny olona. Misy fiasa samihafa hita ao amin'ity fampiharana ity, izay ahafahan'izy ireo mahazo ny serivisy tsara indrindra. Afaka mijanona miaraka aminay ianao ary hianatra bebe kokoa momba ity app ity.
Topimaso momba ny Traza Apk
Izy io dia fampiharana famokarana Android, izay manolotra rafitra fanaraha-maso tsara indrindra hisorohana ny fihanaky ny COVID-19. Izy io dia manome ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny olona, ​​izay nifandray tamin'ny olona voan'ny aretina. Ny endri-javatra rehetra misy amin'ity fampiharana ity dia maimaim-poana ho an'ny olona.
Ity fampiharana ity dia novolavolain'ny governemanta Filipina manokana ary tsy maintsy ampiasaina izany. Manome ny tompon'andraikitra hanadihady mora foana ny olona ao amin'ny fireneny. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy ity fampiharana ity dia tsy mahazo manao asa any ivelan'ny tranony ny olona.
Noho izany, tsy maintsy mampiasa an'ity rindranasa ity ny tsirairay, raha te-hiasa na handeha hivezivezy any ho any izy ireo. Raha te hiditra amin'ity rindranasa ity ianao dia mila mamita ny fizotry ny fisoratana anarana, izay manome ny safidy telo lehibe ho an'ireo mpampiasa. Manome ID Traze ho an'ny mpampiasa tsirairay izy io, amin'ny alalany no hamantarana anao.
Traze App dia manome lafin-javatra roa lehibe ary ny voalohany dia ny kaody QR anao. Izy io dia manome kaody QR ho an'ny olona tsirairay, izay azon'izy ireo jerena rehefa mihaona amin'ny olona iray izy ireo. Azon'ny olona atao ny manara-maso ny kaody na azonao atao ny manara-maso ny kaodiny, izay manome ny fampahalalana nifandraisanao tamin'ilay olona.
Noho izany, ny endri-javatra faharoa amin'ity fampiharana ity dia ny scanner kaody QR, izay ahafahanao mijery kaody hafa. Raha tsy maintsy mitsidika toerana ho an'ny daholobe ianao na mampiasa fitateram-bahoaka, dia misy koa ny kaody QR samihafa hita any amin'ny toerana ho an'ny daholobe sy ny fitateram-bahoaka.
Ny mpampiasa dia tsy maintsy mijery ny kaody ary mampiditra izany amin'ny toerana. Noho izany, misy ny olona, ​​izay tsy manana fitaovana Android ampiasaina, fa misy endri-javatra manokana ho an'ireo olona ireo. Ny voalohany dia ny mpampiasa dia afaka manampy kaonty bebe kokoa amin'ny fitaovana tokana.
Noho izany, azonao atao ny manampy ny fianakavianao amin'ny fitaovanao. Ny safidy faharoa dia ny fanomezana dikan-teny vita pirinty ho an'ny olona. Azonao atao ny manampy olona hafa amin'ny fitaovanao ary manonta ny kaody QR azy, izay azony ampiasaina ho fampiharana ity.
Nozarainay taminareo rehetra ny sasany amin'ireo tena mampiavaka an'ity fampiharana ity, saingy afaka mizaha bebe kokoa amin'izany ianao. Noho izany, sintomy ny fitaovana Traze For Android ary mahazoa serivisy tsara indrindra. Raha manana olana amin'ny fampiasana an'ity rindranasa ity ianao dia manome tolotra fikarakarana mpanjifa ho anao koa izy io.
Anaran'ny fonosana com.traze.contacttraze
Developer Ny sandan'ny anjara Cosmotech Philippines, Inc.
Fomba tsara indrindra hisorohana ny fipoahan'ny COVID-19
Manome Tsiambaratelo avo lenta
Ny fahazoana fehezan-dalàna QR ao amin'ny firenena ihany
Midira kaonty marobe
Mifanaraka amin'ny fitaovana Android ambany ihany koa
Raha te hampidina ity rindranasa ity ianao dia eo amin'ny toerana mety. Izahay dia hizara ny rafitra fampidinana haingana indrindra aminareo rehetra. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay misy eo amin'ny ambony sy ambany eto amin'ity pejy ity. Manaova paompy tokana fotsiny eo aminy ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Traze Apk no fampiharana tsara indrindra, izay ahafahan'ny manampahefana mamantatra mora foana ireo niharam-boina. Ny olon-drehetra dia afaka manana fiainana azo antoka sy salama amin'ny fampiharana ity. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary mahazoa ireo fiasa rehetra. Raha mila fampiharana sy fika mahavariana misimisy kokoa dia tsidiho hatrany ny tranonkalantsika.
Sokajy Apps, famokarana Tags Traze Apk, Traze App, Traze Ho an'ny Android Post Fikarohana
Tiger Arcade Apk Download Ho an'ny Android 
BluTV Apk Download ho an'ny Android [2022 IPTV App]